”SAWIRRO: Markii aan Moratti u sheegay in aan dib ugu laabanayo Ingiriiska ooyin buu la dhacay” – Paul Ince – Gool FM
”SAWIRRO: Markii aan Moratti u sheegay in aan dib ugu laabanayo Ingiriiska ooyin buu la dhacay” – Paul Ince
(Milano) 08 Okt 2017 – Laacibkii hore ee xulka England ee Paul Ince ayaa sheegay in Massimo Moratti “uu ahaa nin culus” jeer uu dib u eegis ku sameeynayay waayihiisii ciyaareed ee kooxda Inter Milan oo ka mid ah kooxihii uu usoo ciyaaray.
Laacibkan oo lagu naanayso Guvnor ayaa bartamihii 90-meeyadii laba fasal-ciyaareed u ciyaarayay kooxda Nerazzurri, isagoo waayihiisii uga sheekeeyay Paddy Power.
“Massimo Moratti wuxuu ahaa ninkii doonayay inaan Inter imaaddo,” ayuu Ince sharraxay. “Way adag tahay in la sharroxo sida uu cajiib u ahaa – wuxuu ahaa nin aad u culus. Wuxuu ii sheegi jirey inaan ahay dagaal yahay, aad buu iila dhacsanaa.” ayuu raaaciyay.
“Ugu dambayntii markii aan u sheegay inaan dib ugu laabayo England, Massimo Moratti ilmo ayaa kasoo daadatay. Waxaa sanadkii xigey iman lahaa Ronaldo, balse arrimo qoys dartood waxaa ii wanaagsanayd inaan dib ugu laabto UK. Ma doonayn runtii – haddii ay tayda tahay weligay waan iska joogi lahaa” ayuu yiri Ince.
“Massimo wuu ooyayay, wuuna welwelsanaa arrintaas. Qof ahaan baan u qiimeeyaa una jeclahay, abid ma illaawi doono, welina waan wada hadalnaa.” ayuu yiri Ince.